Iwu nzuzo - V na akwụghị ụgwọ
My Blog ("anyị", "anyị", ma ọ bụ "anyị") na-arụ ọrụ My Blog na ebe nrụọrụ weebụ (na “Ọrụ”).
Anyị na-eji Ozi Nkeonwe gị maka ịnye na melite Ọrụ a. Site n'iji Ọrụ ahụ, ị ​​kwenyere na nnakọta na ojiji nke ozi dị ka iwu a si dị. Ọ gwụla ma akọwapụtara ya na Nzuzo Nzuzo a, usoro ejiri na Nzuzo Nzuzo a nwere otu ihe dị na Usoro anyị na ọnọdụ anyị, enwere ike ịnweta na https://tweetybucks.com
Mgbe anyị na-eji ọrụ anyị, anyị nwere ike ịjụ gị ka ị nye anyị ụfọdụ ozi nkeonwe nwere ike iji kọntaktị ma ọ bụ mata gị. Ozi nwere ike ịchọta nkeonwe ("Ozi Nkeonwe") nwere ike ịgụnye, ma ọ bụghị naanị na:
Anyị na-anakọta ozi nke ihe nchọgharị gị na-eziga mgbe ọ bụla ị gara na Ọrụ anyị ("Data Data"). Ihe ndekọ Data a nwere ike ịgụnye ozi dịka adreesị Internet gị ("IP"), ụdị nchọgharị, mbipute nchọgharị, ibe nke Ọrụ anyị na ị gara, oge na ụbọchị nke nleta gị, oge eji na ibe ndị ahụ na ndị ọzọ ọnụ ọgụgụ.
Google, dị ka onye na-ere ahịa nke atọ, na-eji kuki iji na-enye mgbasa ozi na Ọrụ anyị.
Kuki bụ faịlụ na ntakịrị data, nke nwere ike ịgụnye njirimara pụrụ iche aha. A na-eziga kuki na ihe nchọgharị gị site na weebụ ma chekwaa na draịvụ ike kọmputa gị.
Anyị na-eji "kuki" ịnakọta ozi. Ị nwere ike ịkụziri ihe nchọgharị gị iji jụ kuki niile ma ọ bụ gosipụta mgbe ezigara kuki. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ịnabataghị kuki, ịnwere ike ghara iji ụfọdụ akụkụ nke Ọrụ anyị.